Muxuu Erdogan ugu sheegay Farmaajo taleefonkii uu u diray? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu Erdogan ugu sheegay Farmaajo taleefonkii uu u diray?
Muxuu Erdogan ugu sheegay Farmaajo taleefonkii uu u diray?
Ankara (Caasimada Online) – Madaxweynaha Turkiga Reccep Tayyip Erdogan ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee taleefon kula hadlay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay lagu doortay magaalada Muqdisho.
Erdogan ayaa ugu horreyn ugu hambalyeeyey Farmaajo guusha uu gaaray, oo uu ku qeexay guul usoo hoyatay shacabka Soomaaliyeed.
“Turkiga waxaa meel weyn kaga yaal muhiimadda xasiloonida iyo baraaraha Soomaaliya” ayuu Erdogan ku yiri taleefonkii uu shalay u diray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida ay sheegeen ilo-wareedyo ka tirsan madaxtooyada Turkiga, oo la hadlay wakaaladda wararka ee Anadolu.